ကိုကိုးအိမ်(မန္တလေး) Mon Oct 22, 02:26:00 AM GMT+8
အလိုလေးလေး... စာသားတွေက ပြီးခါနီးလေထိလေ....
ညို ... မင်းလည်း အမျှားတော်သူပဲနော်....
မေဇင် Mon Oct 22, 09:13:00 AM GMT+8
ထားခဲ့ခံရတဲ့ မိန်းမ တစ်ယောက်ရဲ့ ရင်ဆိုင် တုန့်ပြန်ပုံကို အရမ်းကြိုက်တယ်။
အမ စာရေးတာ သိပ်ကောင်းတာပဲ။ နောက်လဲ ဒီလိုမျိုးလေးတွေ အများကြီး ရေးဦးနော်။
Sandi Mon Oct 22, 10:10:00 AM GMT+8
ဆောင်းနှင်းရွက် Mon Oct 22, 11:45:00 AM GMT+8
ဇာတ်လမ်းထဲမှာ မျှောသွားတယ် ..း)
~ဏီလင်းညို~ Mon Oct 22, 02:25:00 PM GMT+8
ဆွေလေးမွန် Mon Oct 22, 03:11:00 PM GMT+8
သဘောကျလိုက်တာ နော်. ဖတ်လို့ အရမ်းကောင်းတယ်.
ညီလင်းသစ် Mon Oct 22, 03:53:00 PM GMT+8
ကြိုက်တယ်...၊ တစ်ယောက်ထဲပေမယ့် ကိုယ့်လမ်းကိုယ်ဖောက်ပြီး ရဲရဲ လျှောက်ရဲတဲ့ သတ္တိကို...၊ လောကကို မကြောက်တဲ့ သူအရှေ့မှာ လောကကြီးကလည်း ပြန်ပြီး ဦးညွှတ်ရမှာ အသေအချာပဲပေါ့...၊ သဘောကျစွာနဲ့ ဖတ်သွားခဲ့တယ် အစ်မချစ်ကြည်အေး...။
ဆုမြတ်မိုး Mon Oct 22, 04:56:00 PM GMT+8
love the poem so much....... very good post TT
SHWE ZIN U Mon Oct 22, 11:00:00 PM GMT+8
ဖတ်သွားတယ် ညီမရေ ဇာတ်လမ်းထဲမျောသွားတာ ပြီးလို့ပြီးမှန်းတောင် မသိဘူး
Vista Tue Oct 23, 11:21:00 AM GMT+8
ဟုတ်တယ် ဖတ်လို့ ပီးသွားမှန်းတောင် မသိဘူး
All-Rounder Girl Tue Oct 23, 05:57:00 PM GMT+8
Leo Wed Oct 24, 12:20:00 AM GMT+8
အခုလိုမျိုး ဘ၀အားမာန်ပါတဲ့စာတွေ ပိုကြိုက်တယ်။
ဦးဦးနဲ့ လက်ထပ်တာသာမပါရင် ဇာတ်ကောင်ရဲ့ ကာရိုက်တာ ပိုမာန်ပါမယ်ထင်တယ်နော်။
အစ်မ စာရေးအရမ်းကောင်းတယ်။ အမြဲအားပေးနေပါတယ်။
မာယာဖြူ Wed Oct 24, 11:14:00 AM GMT+8
“ဟုတ်တယ်...။ ချစ်ခဲ့ကြတယ်၊ အဲဒါ...ကိုယ် သိပ်သေချာပါတယ် မောင်...” တဲ့
ပျိုးယုဝသုန် (Pyo Yu Wathone) Wed Oct 24, 04:31:00 PM GMT+8
ဟုတ်တယ် မချစ် .. ဒီလိုပဲ လုပ်နိုင်ရမှာပေါ့ ..ဖတ်ရတာ ကျေနပ်လိုက်တာ
T T Sweet Wed Oct 24, 07:06:00 PM GMT+8
ရေးတတ်လိုက်တာ ... စကားလုံးတွေက ရင်ကိုလာလာမှန်တယ်။ များများရေးပါနော် ။
ပန်းချီ Wed Oct 24, 11:33:00 PM GMT+8
ဇာတ်လိုက် မိန်းကလေးရဲ့ ကာရိုက်တာကို ရေးပြသွားတာ လှတယ် ချစ်မး)
အမ်တီအန် Fri Oct 26, 06:28:00 PM GMT+8
အိုးကဗျာလေးကို အံဝင်ခွင်ကျ ထည့်သွားလိုက်တာ..
ဘ၀များစွာထဲက ရှင်သန်နေကြတဲ့ ဘ၀တစ်ခု...
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) Sat Oct 27, 02:28:00 AM GMT+8
အစ်မချစ်ရဲ့ ရေးဟန်တွေကတော့ သွက်လက် ကြွရွနေတာဘဲ
ရေးတဲ့ စတိုင်လေးတွေ အသုံးအနှုန်းလေးတွေလည်း ကြိုက်တယ်။
blackroze Sat Oct 27, 02:36:00 AM GMT+8
San San Htun Sat Oct 27, 10:14:00 PM GMT+8
ကဗျာလည်းကောင်း..အရေးအသားကလည်းကောင်း.. ညို ရဲ့ သတ္တိကို အားကျတယ်..